भण्डारीले हिजो जे भनेका थिए, त्यहीमात्र अन्तिम होइन: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत पार्टीले जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेको विचारधारालाई छाड्न नमिल्ने प्रष्ट पारेका छन् । तर,भण्डारीले हिजो जे भनेका थिए, त्यहीमात्र अन्तिम नभएको उनले बताएका छन ।
एक वर्ष लगाएर पार्टीको सांगठनिक एकता टुंग्याएसँगै नेकपामा वैचारिक बहस सुरु भएको छ । २६ औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा मदननगर बल्खुमा आयोजित स्मृतिसभामा पनि त्यो झल्कियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मदन भण्डारीको विचारमात्र बोकेर बस्ने कि अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
अर्का अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको विचार छाड्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन । उनले भने, ‘अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भने जस्तै जबजलाई सुत्रको रुपमा घोक्ने, कण्ठ गर्ने वा मदनले हिजो जे भन्नुभयो, त्यहिमात्र अन्तिम होइन । हामी उहाँको बिचारलाई मागर्दर्शक सिद्धान्तका रुपमा समायानुकुल ढंगले सिर्जनात्मक प्रयोग गर्छौं ।’
उनले अघि भने, जननेता भण्डारीले अघि सारेको विचारधारालाई हाम्रो पार्टीले छाड्दैन र छाड्नै मिल्दैन ।’
सरकारको बचाउमा उभिन आहृवान
मदन आश्रित स्मृति दिवसको कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको विचारबारे अधिकांश समय बोल्दा ओलीले भने सरकारका कामकारवाहीको बचाउमा समय खर्चिएका थिए ।
जनतामा निराशामा बाँड्ने र समाजमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सिंगो पार्टी एकजुट भएर विपक्षीका भ्रम चिर्नुपर्ने बताएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो विरोध गर्ने नाममा समाजलाई अनुशासनहीन, अराजक बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता कुरामा हाम्रो पार्टी सजग र एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । गणतान्त्रिक संस्था र पद्धति विरुद्धको सुनियोजित प्रचारविरुद्ध पार्टी पंक्ति दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको होइन । गणतान्त्रिक पद्धतिको बिरोध भइरहेको हो भनेर बुझनुपर्छ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आलोचना गर्ने ठाउँ नभएपछि कांग्रेस र केही बुद्धिजिवीहरु ‘मेरो सरकार’को पछि लागेको ओलीले बताएका छन । संसारभर राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो सरकारको वक्तव्य पढ्ने गरेको भन्दै उनले कुवाभित्रबाट आकाश जत्रो देखिन्छ त्यत्रोमात्र हुन्छ भन्ने ठान्न नहुने बताएका छन ।
ओलीले अघि भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारको प्रतिवेदन नपढेर कसको सरकारको प्रतिवेदन पढ्छ ? मेरो सरकारको होइन भने कसको सरकारको नीति कार्यक्रम पढ्ने ? यस्ता स्याल हुँइयामा देशको जेठो भनिएको पार्टी कांग्रेस त लाग्यो लाग्यो, केही बुद्धिजिवीहरु समेत लागेको देख्दा अचम्म लाग्यो ।’
पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया लगभग सकिएको भन्दै उनले सिंगो पंक्ति सरकारको नीतिको रक्षामा उभिनुपर्ने बताएका छन । कार्यकर्ता पंक्ति एकजुट भएर गणतन्त्रान्तिक पद्धतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले नेकपाको बहुमत नपचेकाहरुले समाजमा स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता सिर्जना गर्न खोजिरहेको बताएका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले हामीसँग दुई तिहाई अलितकति पुगेको छैन, तिनीहरुलाई हाम्रो बहुमत नपचेर के गर्नु ? अर्को पटक नेकपाले एकल रुपमा दुई तिहाई ल्याउँछ । हाम्रो यो सफलताको शिखर होइन, आरम्भ हो ।’
मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अराजकतालाई स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र पार्न जबर्जस्त प्रयास भइरहेको भन्दै नागरिकका पनि कर्तव्यहरु संविधानले प्रष्ट पारेको बताएका छन ।
सरकारले राम्रा काम गर्दा उल्टै नेकपा र सरकारको नेतृत्वको विरोध भइरहेको ओलीले बताएका छन । २०४७ सालदेखि बिभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेको बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउन लाग्दा सरकारकै आलोचना भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन।